Thenga i-Bitcoin nge-i-Azerbaijan ngokushesha Nangokuphephile | I-Paxful
Thenga i-Bitcoin ngokushesha ku-i-Azerbaijan
Ingabe udinga usizo lokushintsha i-Azerbaijani Manat (AZN) yakho ibe yi-BTC? I-Paxful, eye yezimakethe ezihamba phambili emhlabeni ze-peer-to-peer Bitcoin, ingakusiza.
I-Paxful isungulwe inomgomo wokuhilela wonke umuntu kwezezimali emhlabeni, futhi silapha ukuze sisize nganoma iyiphi indlela esingasiza ngayo. Ngesistimu yethu yezokuphepha eqinile kanye nosizo lwamakhasimende olutholakala 24/7, ungaqala ukuhweba i-BTC yakho endaweni engacindezeli. Khetha izinkulungwane zokuthengiswayo okuvela kubathengisi bethu abathenjwayo futhi uthole okungabizi kakhulu okuvumelana nawe. Akukho zindleko ozikhokhayo lapho uthenga i-Bitcoin futhi ungakhetha ukukhokha ngenye yezindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300.
Ingabe usukulungele? Vula i-akhawunti, uthole isikhwama sakho semali samahhala se-Bitcoin, futhi uqale ukuhweba namuhla!
Okuthengiswayo okuphezulu kwe-I-Azerbaijan Manat e-i-Azerbaijan
35.00-128.00 AZN 35.00 AZN $0.90 Thenga 74,362.20 AZN Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-1 ago I-PayPal — Honest Trading
26.00-201.00 AZN 26.00 AZN $0.87 Thenga 76,926.42 AZN Thenga Thenga
79.00-425.00 AZN 79.00 AZN $0.84 Thenga 80,131.68 AZN Thenga Thenga
Ukubonwa ngemizuzu engu-1 ago I-PayPal — Instant Release
34.00-104.00 AZN 34.00 AZN $0.93 Thenga 71,797.99 AZN Thenga Thenga
Ku-inthanethi I-Wise (TransferWise) — INSTANT REPLY AND RELEASE
Ku-inthanethi I-Xoom Money Transfer — INSTANT REPLY AND RELEASE
Ku-inthanethi I-Remitly — INSTANT REPLY AND RELEASE
79.00-442.00 AZN 79.00 AZN $0.80 Thenga 83,336.95 AZN Thenga Thenga
Ku-inthanethi I-Paysend.com — INSTANT REPLY AND RELEASE
Ku-inthanethi I-Western Union — INSTANT REPLY AND RELEASE
Ku-inthanethi Ukuthumela Imali kwe-RIA — INSTANT REPLY AND RELEASE
Ku-inthanethi I-MoneyGram — INSTANT REPLY AND RELEASE
Izindlela zokukhokha ezihamba phambili e-i-Azerbaijan
Siza abanye abantu e-i-Azerbaijan bathole i-Bitcoin futhi ungathola inzuzo ENKULU efinyelela ku-60% entweni ngayinye ethengiswayo. Qala ukuthengisa nge-akhawunti yakho yasebhange esendaweni, bona umhlahlandlela wethu wamahhala. I-Paxful ithola abathengi abayizi-1000 abavela e-i-Azerbaijan usuku ngalunye.
Ingabe wazi abantu abaningi abafuna ukuthenga i-Bitcoin e-i-Azerbaijan? Nge-Bitcoin Kiosk kanye Nohlelo lwenxusa uzuza-2% ekuhwebeni ngakunye phakade ngokwabelana nje ngelinki. Qala manje.